Budata AVG VPN 1.12.841 maka Windows
Ikpo okwu: Windows |dị: 1.12.841 Asụsụ: Bekee
Free Budata maka Windows (20.90 MB)
Budata AVG VPN,
AVG Secure VPN bụ nefu VPN sọftụwia maka Windows PC (kọmputa). Wụnye AVG VPN ugbu a iji kpuchido netwọki WiFi gị ma chọgharịa na-enweghị aha. AVG Secure VPN ma ọ bụ AVG VPN bụ mmemme VPN nefu nke enyere Windows PC, Mac kọmputa, ekwentị gam akporo na ndị ọrụ iPhone.
Iji kpuchido netwọki WiFi gị ma chọgharịa na ịntanetị na nzuzo, pịa AVG VPN Download bọtịnụ dị nelu iji budata mmemme VPN na kọmputa gị. Nwere ike ịnwale atụmatụ niile nke ọrụ VPN nefu maka ụbọchị 7.
Mmemme VPN na-enye nchebe na netwọkụ WiFi niile nebe ọ bụla ị gara.
Ọ na-echebe gị nụlọ na netwọọdụ WiFi ọha, ma ị na-eme nchọgharị na ịntanetị ma ọ bụ na-eme azụmahịa gị. Ọrụ VPN na-edebekwa ihe ị na-eme na ntanetị. Site ninye njikọ ezoro ezo, ọ na-ahụ na ndị agbata obi gị, ndị na-agba ọsọ, ndị na-eweta ọrụ ịntanetị na ndị ọrụ gọọmentị anaghị ahụ ihe ị na-eme nịntanetị.
Ngwa VPN na-enye gị ohere na-enweghị njedebe nụwa niile. Ọ na - enye gị ohere ịhọrọ mba ọ bụla site na listi sava mba na - achọghị ka amata ma chọgharịa ma nweta ọdịnaya dịka ị nọ ebe ahụ. Ngwanrọ VPN nke AVG pụtara ihe ndị a:
Ọrụ VPN dị mfe ma dị ike: budata ma wụnye VPN ma nwee njikọ dị nchebe site na ịpị bọtịnụ.
Ihe ezoro ezo nke ndị agha: Ọnọdụ izo ya ezo na ụkpụrụ 256-bit AES na-echebe azụmaahịa gị nịntanetị site na anya anya.
Karịrị ebe 50 ịhọrọ site na: Sava agbasa ozi nikuku na-enyere gị aka ịhapụ ihe ngosi kachasị amasị gị noge njem gị.
Enwere ike iji ya rụọ ọrụ na ngwaọrụ 5 notu oge: Enwere ike iji VPN a na ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ na mgbakwunye kọmputa Windows gị: I nwekwara ike iji ya na Mac, gam akporo na iOS ngwaọrụ.
30-ụbọchị ego-azụ nkwa: Gbalịa ya mbụ, nihe ize ndụ-free; Ọ bụrụ na afọghị gị, a ga-enyeghachi gị ego gị. Enweghị nsogbu, enweghị eriri.
AVG Secure VPN (AVG VPN) dị mfe iji; Get nweta VPN njikọ naanị nime usoro atọ:
Jikọọ na netwọk WiFi ịchọrọ: Nụlọ, ọrụ, ụlọ akwụkwọ, kafe, ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ ụlọ ahịa - AVG VPN sọftụwia na-arụ ọrụ ebe ọ bụla.
Gbanwee Secure VPN: Bido urenọ ná Ntụkwasị Obi VPN wee pịa bọtịnụ Mepee. Nwere ike ịhọrọ ebe dị iche noge ọ bụla.
Chọgharịa na ntukwasi-obi na enweghị aha: Nchọgharị na-enweghị aha, adreesị IP na-ezo, ebe zoro ezo, ha niile notu Pịa!
AVG VPN Ụdịdị
Nha faịlụ: 20.90 MB
Mmepụta: AVG Mobile Technologies